Wasiir Ridwaan: Xil ka qaadistii Sanbaloolshe waa loo midoobay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Wasiir Ridwaan: Xil ka qaadistii Sanbaloolshe waa loo midoobay
Mareeg.com: R/wasaare ku xigeenka Soomaaliya, hana wasiirka arrimaha diinta iyo awqaafta ayaa sheegay in madaxda dowladda Soomaaliya aysan isku khilaafin xil ka qaadistii Agaasimihii Nabad Sugidda, C/llaahi Maxamed Cali Sanbaloolshe.
Wasiir Ridwaan ayaa hadalkaas sheegay kadib kulan aan caadi aheyn oo ay golaha wasiirada Soomaaliya ku yeesheen Muqdisho, uuna ka qeybgalay Madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud.
Shirka waxaa looga hadlay arrimaha siyaasadda iyo amniga ee dalka ayaa waxaa guddoomiyey ra’iisal wasaare ku xigeenka ahna wasiirka diinta iyo Aw-qaafta, Ridwaan Xirsi Maxamed.
Ra’iisal wasaare ku xigeenka oo warbaahinta la hadlay kulanka kaddib ayaa sheegay in shirka lagu falan qeeyey sidii la isaga kaashan lahaa nabad ku soo dabbaalidda arrimaha dalka, gaar ahaanna goobaha dhowaan laga saaray Al-Shabaab.
Ridwaan ayaa tilmaamay in ay dowladdu guulo ka gaartey barnaamijkeeda xakamaynta hubka iyo arrimaha dib u heshiisiinta, kuwaas oo uu ku tilmaamay in ay horseed u yihiin ka mira dhalinta higsiga cusub ee la doonayo in dalku gaaro sannadka 2016-ka.
Sidoo kale, R/wasaare ku xigeen Ridwaan meesha ka saaray in khilaaf u dhaxeeyey madaxweyne Xasan Sheekh iyo R/wasaare C/weli Sheekh Axmed, wuxuuna xusay in arrinta ku saabsan xil ka qaaadista Sanbaloolshe ay ku dhamaatay meel wanaagsan.
“Arrinta agaasimaha Nabadsugidda waxaad moodaa dadku iney gaarsiiyeen heer khilaaf soo kala dhexgalay madaxda qaranka, aarintu sidaas maaha, ee golaha wasiirada ayaa go’aan qaatay, kadibna madaxweynaha ayaa go;aan kale kusoo saaray, si wanaagsan ayayna ku dhamaatay” ayuu yiri Ridwaab Xirsi Maxamed.
Madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud oo khudbo ka jeediyey kulanka ayaa ku dheeraaday baahida loo qabo wada shaqayn joogto ah oo dhex marta hoggaanka sare ee dalka iyo hay’adaha dowladda.
Madaxweynaha ayaa wasiirrada ku boorriyey in ay la yimaadaan dadaal dheeraad ah oo xil gudasho, six al waara loogu helo mushkiladaha muddada dheer ka jirey dalka.
Scotland:Small Countries’ Big Successes
Kurdiyiin ka baxsanaya IS oo ku shubmaya Turkiga